Shiinaha COLOR PVC VINYL warshad iyo soosaarayaasha | Shawei
Qodobka Shayga: AD-V025
Magaca: Midabka Vinyl Vinyl
Isku-darka: 100um PVC + 140g warqad sii deyn ah
Codsiga: Sanduuqa Iftiinka, dariishadda
Waxaa loo isticmaali karaa jarista xarfaha iyo sawirada, sidoo kale ku habboon qurxinta gudaha iyo dibedda, calaamadaha calaamadaha.
Dhumucda Filimka 0.1mm
Sii daa warqad 120gsm, 140gsm
Cabir Cabbirka yar ee loo habeeyay
Nooca xabagta Joogto ah
Bannaanka waara 1-2yeas, 3-5years
Xirmo Kartoonka Dhoofinta Heerka ah
Astaamaha 1.Waxaa loo isticmaali karaa gawaarida, Dhismaha, baska, metro, daaqada gaariga ama qurxinta darbiga muraayadda; 2. Way fududahay in la gooyo warqad kasta, astaan ​​iyo qaab gaar ah oo muuqaal ah adoo goynaya plotter 3. Koollo cad oo cad oo aan lahayn xabagta ayaa weli ah dhibaato; 4.
iyo deegaanka adduunka.
Codsiga 1. Si ballaaran loo isticmaalo calaamadaha gudaha / banaanka2. Xayeysiinta ku meel gaarka ah iyo barta iibka xayeysiinta.
3. Sumadaha alaabta.
4. Xaashida looxa, sanduuqa nalka, goynta kumbuyuutarka.5. Qurxinta dusha sare ee xarfaha midabada badan leh iyo sawirada.
Midab Goynta Vinyl Fasalka A
1.facefilm: 100 mikron PVC film
2.transparent xabagta ku saleysan acrylic joogto ah
Midabaynta Goynta Vinyl Fasalka B
1.facefilm: 80 mikron film PVC
1. Is dhejiye dhejis ah
2. Cimri dheer codsi gudaha iyo dibeddaba
3. Dhaldhalaalaan ama dhammaystiran ayaa la heli karaa
4. Midabbo badan oo xulasho ah
5. Way fududahay in la jarjaro warqad kasta, astaan ​​ama qaab gaar ah adoo jarjaraya sirqoolka
Hore: MIDABKA PVC VINYL-DHAQAALAHA
Xiga: NADIIFKA XIRIIRKA XIDHIIDHKA STATIC
SUPER GLOSSY GUDAHA PVC VINYL-LAGA SAARAY
Muraayadda PVC ee Tixraaca
NADIIFKA XIRIIRKA XIDHIIDHKA STATIC
MIDABKA PVC VINYL-DHAQAALAHA